हङकङद्वारा नेपालसामु १५४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत, जित कस्को ? - eKhojkhabar
हङकङद्वारा नेपालसामु १५४ रनको लक्ष्य प्रस्तुत, जित कस्को ?
काठमाडौं : जिम्बाव्बेमा जारी आइसीसी विश्वकप क्रिकेट छनोटअन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले १५४ रनको विजय लक्ष्य पाएको छ। जिम्बाव्बेको बुलाबायोस्थित एथ्लेटिक मैदानमा टस जितेर व्याटिङ रोजेको हङकङले ४८.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १५३ बनायो।
हङकङका लागि निजाकत खानले सर्वाधिक ४७ रन बनाए भने एहसान खानले २५ र बाबर हायतले २० रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले सम्झन लायक प्रदशन गर्न सकेनन् । नेपालका सन्दीप लामिछानेले ३, बसन्त रेग्मी र करण केसीले २/२ ,सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले १/१ विकेट लिए ।
नेपाल भर्सेस हङकङ
स्थान : क्विन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो, जिम्बावे
प्रतिस्पर्धा : एकदिवसीय विश्वकप छनोट, म्याच १९
मिति : फागुन २८ गते सोमबार, दिउँसो : १:१५ बजे
हङकङ : बाबर हयात (कप्तान), अहसान अब्बासी, नदीम अहमद, तनवीर अहमद, तनवीर अफजल, वाकास बरकत, क्रिस कार्टर, ऐजाज खान, एहसान खान, एहसान नवाज, निजाकत खान, स्कॉट मैककेनी, अंशुमन रथ, सिमंदिप सिंह और शाहिद वासिफ साइमन कुक (कोच)
तेश्राे मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय गाेल्डकपमा मलेसियाकाे हिमालयन फुटबल क्लबकाे उपाधिकाे लक्ष्य.
वेष्टइण्डिजले काट्यो विश्वकपको टिकट, स्कटल्याण्डलार्इ वर्षाले डुवायो
एसियन कप फुटबल छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा, को–को परे ? (नामसहित) हेर्नुहोस
नेपाली टिमले पाकिस्तानमा पाकिस्तान बिरुद्ध नै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वनडे खेल्ने ?
नेपालको अबको लक्ष्य ‘टेष्ट मान्यता’, तर क्यानको विवादले समाधान पाओस्- पारस
नेपाल टिम केहि बेरमा उत्रदै, स्वागतमा समर्थकको बाक्लो उपस्थिती